Zonao fa tsy angano angano
SUJET: Manana ZO marina ve ny MSM eto gasikara?
Manana ZO marina ve ny MSM eto gasikara? Il y a 4 Taona, 4 Volana Karma: 0
Tahaka ny olombelona rehetra ny MSM, manana zo tsara izy tahaka ny olona rehetra. Tokony aparitaka izany a! ho fantatry ny rehetra, sa ahoana?
Re: Manana ZO marina ve ny MSM eto gasikara? Il y a 3 Taona, 5 Volana Karma: 0
ny olona rehetra dia manana ny zo, ka noho izany tsy ankanavaka io fa na MSM , na tsy dia tokony hitovy ny zo, zo ny MSM ny hovoatsabo ra sendra marary, hiasa, hoany ampiangonana, hianatra , hilalao,haneho hevitra, ha ny Zo kosa anefa dia mitaky ADIDY sy ANDRAIKITRA koa dia samia mampiasa ny zo-ny dia za adino ny miandry anao : Adidy sy Andraikitra